နှာခေါင်းထဲ အပုတ်နံတောင် နံလာတယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သိက္ခာကျ၊လူပြောစရာဖြစ်ပီ။ကိုယ်တွေလဲ ရခိုင်ဇာတိသားတွေပါ။
ခုလောက် အောက်တန်းကျတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ဖို ့တွေ းမကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး။တောင်ကုတ်ဆို
တဲ့ အရပ်မှာ လူတွေနေတာရော ဟုတ်သေးရဲ့လားလို ့မေးစရာဘဲ။
ဒီလို လူမဆန်တဲ့အပြုအမူနဲ့ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ရှုံ့ချပါတယ်။ ဘာသာရေးအရကော၊
လူမှုရေးအရပါ မလုပ်သင့်၊ မလုပ်ထိုက်တဲ့ လူရမ်းကားတွေရဲ့ အပြုအမူတွေပါ။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို
ဒို့တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုတာ ၊ အစွန်းရောက်မွတ်စလင်တွေကို မုန်းတာမှန်ပေမဲ့ ဒီလို
လူမဆန်စွာ လူသားအချင်းချင်းရက်စက်မှုကိုတော့ ရှုံ့ချပါတယ်။ သတ်တဲ့လူတွေကိုလည်း တရားဥ
မဆိုင်တဲ့သူတွေကို သတ်ခြင်းအား ကန် ့ကွက်ပါ၏
တစ်ကယ့်တရားခံ တွေကို ပြည်သူားတွေ နဲ ့သေဆုံးသူရဲ ့မိဘဆွေမျိုးတွေ အတွက် တရားဥပဒေအတိုင်း အမြန်ဆုံး စီရင်ချက် ချခဲ့ရင် ၊ ဒီလောက်ထိ ဆိုးသွားလိမ့်မယ် လို ့မထင်ပါဘူးဗျာ ။
သမ္မတရုံးအရာရှိတဦးကတော့ တောင်ကုတ်မြို့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ Facebook မှာ အခုလို ရေးသားထားပါသတဲ့
ဖြစ်ခဲ့သောကိစ္စရပ်များမှာ စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်သလို စတင်ဖြစ်ပွားစေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှာလည်း မဖြစ်သင့်သော အနေအထား ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ နောက်ဆက်တွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်မှာလည်း စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ရာ အနေအထား ဖြစ်နေပါသည်။
အထက်တန်းကျသော စိတ်ဓါတ်များကို မွေးမြူခြင်းဖြင့် သွေးဆူလွယ်၊ သွေးကြွလွယ်သော အနေအထား၌ ယမ်းအုံကို မီးနှင့်ရှို့သလို မဖြစ်စေရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ သမိုင်းနှင့်ချီသော ဖြစ်ရပ်ဆိုးများ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်တွင် မတွေ့ကြုံလိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ ရင်ထဲမှ ဆန္ဒဟူ၍ လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ထားပါကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
မကြားလဲနေ ကြားလဲကြား. ငါလိုးမသားတွေ ဒီလိုကောင်မျိုးတွေ
ငါတို ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မရှိဘူး။တောင်ကုတ်မြို့ဆိုတာ အကျင့်ပျက်
ခိုင်းတဲ့ကောင်တွေက ခိုင်း၊ကြည့်ကောင်းလို ့ထိုင်အားပေးနေတဲ့
သူတွေနဲ့ဟုတ်နေတယ်။တောင်ကုတ်ဆိုတဲ့ နေရာကို ဘယ်သူ
မှ မသွားကြလေနဲ ့။
taunggoke thar says:
မင်း ဘယ်လောက်သိလို့လဲ ဆဲထားရအောင် မင်းစကားဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ပြော
အဲလိုကောင်တွေကိုဆဲပေးရမယ်…ဗမာတိုင်းတော့ ကလားတွေကိုထောက်ခံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ….. အနည်းအကျင်းမို့လို့ နာမည်တပ်ပြီးဆဲရင်ပိုတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား
ငါတို့လဲသွေးရှိတာပဲ မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်ရင် ငါတို့လဲ မနေပါဘူး
၁. မင်းတို့ရဲ့ဘုရားက ဘယ်သူလဲ
၂. ဘယ်ကလာလဲ၊ မင်းတို့ဘုရားရုပ်တုကို မေးကြည့်၊ သူကမင်းကို ပြောပြလိမ့်မယ်။
mayloe kalar lee sote nay tat khwaymathar phoekhwarchay min khway nay rar khway nay bar mha win houne nay sa rar akyune ma shit bu .
မြင်ရခဲ့တဲ ဓါတ်ပုံတွေပါပဲ …. ။ ဒီလိုမြင်ရတော့လဲ .. တကယ် … စိတ်မကောင်းဘူး … ။
အပြစ်ရှိသူကိုသာ … ပြစ်ဒဏ်ချသင့်တာပါ …. ။ အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုတော့ လူမျိုးစွဲကြောင့် မထိခိုက်စေချင်ဘူး … ။ ပြည်တွင်း စစ်တွေ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်မှာကိုလည်း … စိုးရိမ်မိပါတယ် ။
ဒီလို ပြသနာတွေ ဆင့်ကဲဖြစ်ပွားလာတာကလည်း …. အပြစ်သားတွေအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ချမှု အလျင်မြန်မလုပ်သေးတာကြောင့်ဖြစ်မယ် …. ။ တချို့သော အမှုတွေက … ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ အဆင့်ဆင့် တရားရုံးတက်တာတွေ ဘာတွေ အချိန်ယူလုပ်ရတာလည်း ရှိတယ် … ။ အမှုတစ်ခုဖြစ်လျှင် … နှစ်နဲ့ ချည်ပြီးတောင် ကြာတတ်သေးတယ် … (သက်သေတွေ ထွက်ဆိုချက်တွေစုံလင်နေပါလျှက် တချို့ အမှုတွေ နှစ်နဲ့ ချီအောင် ကြာတတ်တာ ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး …. )
အခြေနေတင်းမာမှုတွေ ဒီထက်ပိုမဆိုးလာခင် …. action ယူသင့်နေပြီ … ။
ရင်တွေပန်းတွေနှလုံးတွေတုန်သွားတာပဲ ……….ဒီလိုပုံတွေမကြည့်ရဲဘူး ……. အမြန်ကျော်ကြည့်လိုက် ပါတယ် …. ပို့စ်တင်ပြီး သတင်းပေးတာကိုတော့ကျေးဇူးပါ ……..
ဒီပို့စ်က ပုံတွေဟာ လူကြည့်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့
ကျနော့်အနေနဲ့တော့ ပုံတွေကို ပိတ်ပေးစေချင်တယ်ခင်ဗျ…
အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ တိုင်းပြည်အတွက် စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ပုံတွေကိုပိတ်ပြီး သတင်းအနေနဲ့ပဲထားပေးပါလားဗျာ…
ကိုကြောင်ဖတ် … ကိုယ့်ဗလမှ ကိုယ်အားမနာအေ … မကြည့်ရဲဘူးတဲ့ … ။
ကြည့် … ကြည့် …သေချာကြည့် ….. လူဆိုတာ သေမျိုးကြီးပဲ ………. ကောင်းကောင်းသေရတာနဲ့ ဆိုးဆိုးသေရတာပဲကွာတာ … ။ သေသွားလျှင် ဘာမှ ယူသွားလို့မရဘူးတွေ့လား ဟိုမှာ ထမိန်တွေတောင် ပလူပျံလို့ ၊ တစ်ရာတန်လေးကတောင် ပါသေးတယ် … ….
တဂျီးချင့် ….. ပုံတွေကိုတော့ မဖျက်ပါနဲ့ ………. မြင်ရခဲတဲ့ပုံတွေမို့ရယ် … ဒါတွေကိုမြင်ပြီး လူမျိုးရေး မုန်းတီးနေတဲ့ လူတွေ ကြားထဲ .. စိတ်မကောင်းဖြစ်မိ သံဝေဂရမိတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တာရယ်မို့ပါ … ။ ခေါင်းစဉ်မှာသာ (ကြောက်တတ်သူများ မကြည့်ရလို့ ထပ်ဖြည့်ပေးစေလိုပါတယ် .. ) ။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း .. ကုလား မုန်းပါလျှက ်… ဒီလိုပုံတွေ မြင်မိသွားမှ .. .လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့စိတ် .. ပျောက်သလိုဖြစ်သွားမိလို့ပါ …. ။
တော် တော်ဆိုးတာဘဲ စိတ်မောတယ်
ဗုဒွဘာသာ နိုင်ငံမှာနေပြီး နှလုံးလှစေ ချင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာ။ နာတယ်။ နာတယ်။ သံသရာ တစ်လျှောက်မှလဲ နာရအုံးမှာပါ။ ဝဋ်လည် ရအုံးမှာပါ။ ကြောက်ချာကြီး ကြောက်ချာကြီး။ တွေးရင် ကြက်သီးထတယ်။
ဝဋ်ဆိုတာ နောက်ဘဝ မခြားဘူးနော် ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
ဘယ်ဘာသာက မှ အဲလိုရက်ရက်စက်စက်လုပ်တာ ကိုခွင့်ပြုမယ်မထင်ပါဘူးလေ။
ပုံတွေ ကိုအခုလိုမြင်ရတော့လဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘယ်ဘက်ကိုမှ ထပ်မထိခိုက် မနစ်နာစေလိုပါ။
ဒေါသတရားကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ကြတော့ဘဲ ဟိုဘက် ဒီဘက် ဒီလိုအပြန်ပြန်အလှန်လှန် လုပ်နေရင်လဲ ပြီးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဟိုတရားခံ ၃ ယောက်ကို အမြန်စီရင်ပြီး မှ ရန်မီးငြိမ်းမလား မပြောတတ်။ ဟိုဘက်ကလည်း၈ ယောက်တောင်ခံထားရတာဆိုတော့ ငြိမ်နေ မယ်မထင်။ အစိုးရလိမ်မာပါးနပ်စွာနဲ့၂ ဘက်ကြား ဝင်ရပ်မှ မဟုတ်ရင်တော့ အဲဒီလူမျိုးရှိနေရာ နေရာတိုင်း အေးချမ်းနိုင်ဖို ့မမြင်။
ကြားရတာတော့ အဲဒီတရားခံ ၃ ယောက်ကို အထဲမှာ လူလဲခိုင်းဖို့အတွက် ငွေ သိန်း ၇၀၊ ၈ဝ နဲ ့လိုက်ဖို ့အတွက် ဟိုက ဒီက ငွေလွှဲတွေ ပေးပို ့တာကတစ်ကြောင်း၊
အဲဒီကားမထွက်ခင်ကလည်း သံတွဲ လဝက က မသွားသင့်ကြောင်း တားလိုက်တာကိုတောင် မောင်းသူက ရတယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတာကတစ်ကြောင်း (မောင်းသူလဲ ရော စပယ်ရာပါ မူစလင် လို ့သိရပါတယ်)
တောင်ကုတ်ရောက်တော့ အဲဒီ ဘာသာရေးလိုက်စားသူများက ကားဂိတ်မှာတင် ဆင်းပြီး ဝတ်ပြုတာက တစ်ကြောင်း၊ သွေးဆာနေသော သူများကို ဆွလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သက်ဆိုင်ရာနယ်က တပ်တွေ ရဲတွေက ဒီအခြေအနေတွေကို ကြိုမြင်ပြီး ကိုင်တွယ်ရမှာကို ဖြစ်တော့မှ လုံ ခြုံရေးလိုက်ချနေတာ တွေ အင်အားထပ်ဖြည့် နေတာတွေ လုပ်နေတာကလည်း ၊ ဘာတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေကြမှန်းမသိတော့ဘူး။ (အင်း… ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးးးးး ……………..)
ဒါမျိုးတွေကို မမြင်ချင်မကြားချင်ပါဗျာ။ ဆက်ပြီး ထပ်မကြားရပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းရမှာပါ။ အရာရာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြီးသွားစေချင်ပါတယ်။ ဒီပြသာနာတွေရဲ့ အစဖြစ်စဉ်အမှုကို အမြန်ဆုံးသာ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးလိုက်ပါ။ ဒီပုံတွေကတော့ မြင်ရတာ အတော်ဆိုးသဗျို့ သဂျီးရေ။
ဒီလို အပြုမူနဲ့လုပ်ရပ်တွေကတော့ မလုပ်သင့်တာအမှန်ပါပဲ …
အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကို လူမျိုးရေး မုန်းတီးမူကြောင့်တော့ ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ..
အပြစ်ရှိသူတွေကို တရားဥပဒေအရ အမြန်ဆုံး အရေးယူနိုင်ပါစေ…..
ထပ်ပြီးကြားရတာကတော့ သံတွဲက GTC ကျောင်းကို ကုလားတွေက ဝိုင်းတယ်ဆိုပဲ အဲကျောင်းက တချို့သော ကျောင်းသားတွေ ကိုယ့်အိမ်တွေကို ထွက်ပြေးလာကြတယ်လို ့လဲသိရတယ်။
အဲဒီကားပိုင်ရှင်ကလဲ သူတို ့လူမျိုးပဲတဲ့။ (သတင်းအမှန် ကဘာလဲဆိုတာကိုတော့ အတည်ပြုပေးကြစေလိုပါတယ်)၊ မဆိုင်သူတွေ မထိခိုက်တာတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
ဒီသတင်းက သတင်းအမှားဘဲ။သံတွဲသားတွေ ယဉ်ကျေးပြီးသားပါ.
ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ငါတို ့မြို ့မပါဘူး။ကျောင်းသားတွေကို အိမ်
အရောက် မိဘတွေဆီ ပို ့ပေးပြီးပြီ။
သေဆုံးသွားသူများရဲ့.. ကျန်ရစ်သူမိသားစုများကို လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်းပြောလိုပါတယ်..
အခုလိုရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်သူတွေကို… တရားဥပဒေအရ.. ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးဖို့ ..ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို.. တိုက်တွန်းပါတယ်.။
အမှုဖြစ်ရာ အနီးအနားဒေသက.. ဆရာတော်သံဃာတော်များကလည်း.. တရားဥပဒေအတိုင်းဖြစ်ဖို့ကူညီပေးစေလိုတာပါ…။
ကျုပ်တော့.. အဲဒီနယ်ကို.. နိုင်ငံခြားသားများသာမက.. စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုတ်နှံသူများပါ မသွားသင့်သော အနက်ရောင်အရပ်လို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်..
သဂျီးရေ … ဘာဆိုင်လို့ ဘုန်းကြီးတွေကိုပါ ဆွဲထည့့်ရပြန်သတုံးနော် …. ။ သူ့တို့ဘာသာ သူနေပါစေလား … ဘုန်းကြီးတွေ ပါလာမှ လူမျိုးရေးကနေ .. ဘာသာရေးဘက်ကို ဦးလှည့်သွားဦးမယ် … ။ အာဏာပိုင်တွေက .. တရားခံတွေကို အရေးမယူသေးလို့ … ဒီလိုဖြစ်နေတာပါ …. ။ တွေဝေနေတာပဲလား ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းကိုက .. ဒီလို ကြံ ့ကြာမှုဖြစ်စေတာပဲလားတော့ မပြောတတ်ဘူး … ဒီလိုတွေ လုပ်နေလို့ကို .. ပြည်သူတွေဘက်က လူစားထိုးတယ်လို့ ….ထင်ပြီး .. ပွဲကြမ်းကုန်တာ … ။
ဖျက်တာ မဖျက်တာထက် ပုံတွေ သေးပေးလိုက်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ်။
ပုံသေးရင် နည်းနည်း ပို အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။
mical chan says:
သို ့Kai ပြန်တင်ပေးစေလိုပါတယ်။ကျနော်ပုံများကို ယူပြီးပြန်ဝေမျှနေတာ
အစားအသောက်တော့ ပျက်ကုန်ပါပြီဗျာ..သွားပါပြီ..တော်ပြီ ထပ်မကြည့်တော့ဘူး..ဟူး..
နှလုံးမကောင်းရင် သေချာမကြည့်ကြပါနဲ ့ဗျို ့..အူး.ဝှူး…
ဘာပြောလို ့ပြောရမှန်းတောင် မသိပါဘူး.. ဒီလိုနည်းနဲ့တော့ မဖြေရှင်းသင့်ဘူး..ဟူး..
သွေးထွက် သံယို ဖြစ်တာ ဘယ်လိုမှ မကောင်းပါဘူး။
မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက် ကို မှ မသေစေချင်ပါဘူး မနာစေချင်ပါဘူး။
အစိုးရ အမြန်ထိန်းမှ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
ထိန်းသိမ်းမှု နောက်ကျရင် တဖက်နဲ့ တဖက် တင်းမာပြီး ဒုက္ခတွေ များကုန်တော့မယ် ထင်တယ်။
ပုံ(11)ထိပဲမြင်ရတယ်….။ ကြည့်ချင်ပါတယ်ဆို သူကြီးရယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဖျက်ပစ်လိုက်တာလဲ။ ရခိုင်တွေက အမျိုးအရမ်းချစ်တော့လည်း………………..။ အကျိုးရှိလို့အကြောင်းရှိတာဖြစ်မှာပါ။ အထက်က မန့်ကြတာ တွေလိုပဲ တရားခံတွေကို လူလဲဖို့တွေ၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ပြကြတာတွေကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်လို့ကိုယ်ခံကြရတယ်လို့ဘဲ မှတ်ယူကြပါ။ ဒါပေမယ့် ရပ်ရွာတော့ မအေးချမ်းတော့
ဒီဇာတ်လမ်းကိုစခဲ့တဲ့ ၃ယောက်ကိုအမြန်အမှု့စီရင်ပြီး မှန်ကန်တယ်ဆိုယင်
လူမြင်ကွင်းမှာ သတ်ပစ်ရမှာ ဒါမှခံရတဲ့ဘက်လဲကျေနပ်သလို
ခုတော့ အလိုအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာရတော့တာပေါ့….
လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်းမှာ ဆိုးတဲ့သူတွေ ဆိုတာရှိကြတာပါဘဲ..
ဖျက်ဖြစ်တာကောင်းပါတယ် လိုချင်ကြည့်ချင်ယင် မေးလိပ်စာရေးပေးလိုက်ပါ….
Thiha Wana says:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.110899755717885.12685.100003935835322&type=1 ဒီမှာဓာတ်ပုံအကုန်ရှိပါတယ် (လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့ကောင်တွေဒါကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့ပျော်သေးတယ်ဆိုမင်းတို့……………..)
မင်း ကဘာဖြစ်လို့ မင်းအဖေတွေဘက်ကနာနေတာလား ဘာလဲ မင်းက ကုလားမသားမို့လို့လား
ဒါမှမဟုတ် မင်းညီမက ကုလားကိုကုန်းနေလို့လား
မင်းမှာအဖေဆိုတာရှိလား. ရှိခဲ့ရင်းလည်း မင်းအဖေကို မေးကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာ. သူကိုမေးကြည့်လိုက်ရင်း ကုလားဆိုတာဘယ်ကလာလဲ. ဗုဒဘာသာဆိုတာဘယ်က လာလဲ. မင်းကိုသူပြောပြလိုက်မယ်. အင်္ဂလိပ်တွေခေါ်သလို ကူးလာတဲ့သူတွေကို ချစ်တီးကုလားတွေက စကားမပီတော့ ကူးလာကနေ (ကုလား) ဆိုတာဖြစ်သွားတာကို မင်းက မသိလို့လား.. ဒါမှမဟုတ် မင်းပညာအရည်အချင်းမရှိလို့.. ပြောတာကို သိချင်တယ်.
talktalk ster says:
Those racist reckless,irrational , dim witted criminals should be punished. Those who speak for justice and care for humanity should be united to punish those act. What make us better is for acting asahuman. Not being in any kind of race. Some of racist arakan group should be ashamed of themselves and should notbin this society. What make me more disappointed is those living in foreign countries and still act and provoke like this. What is like being discriminated in aboard in terms of poor, rich, black,white,appearance,nationality??.. Pls think twice before you act or sayaword could mislead to this killing spear by those reckless pp.
Alaung Phaya says:
တောင်ကုတ်မှာသတ်ထားတဲ့သူပုံတွေ ဒီမှာတင်ထားတာ fb မှာနေရာတိုင်းပေါ်လာပြီ။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာမိန်းခလေးတွေဒီပုံတွေကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူး။
မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာရောက်နေတဲ့ ဗုဒဘာသာမိန်းကလေးတွေအတွက် လုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့၊ ဘယ်ဘာသာတရားမှ မကောင်းတာကို မသင်ကြားဘူး. ယခု လုပ်ရပ်က တရိဆန် ဆန်လွန်ပြီ. လူစိတ်မရှိတဲ့ လူတစ်စု (သို့) အနိုင်လိုချင် ချယ်လယ်လို့ချင်တဲ့ ပါတီတစ်စုက နောက်ကနေ ကြိုခိုင်းပြီး. ခိုင်းစေးတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ သုံးသပ်မိပါတယ်.
ဟိန်း ဝင်း (ထားဝယ်သား) says:
ထမင်းတောင် မစားချင်တော့ဘူး … တော်တော်ဆိုးတာပဲ …
မွတ်ဆလင်ထုံးစံအရ နေ့တွင်းချင်း မြုပ်ရ မယ်ဆိုပြီးယူသွားတယ် ပြီးတော့ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်။ မြုပ်မယ်ဆိုရင် အဝတ်ဖြူလိုတယ်။ သန့်ရှင်းပေးရမဲ့လူလိုတယ်။ ဒါလူသတ်မှူသက်သေခံတွေ ဒါကိုရဲကမစစ်ဆေးဘဲလွှတ်လိုက်တာ တော်တော်အံ့ဩတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းတစ်ယောက်မှပါမလာဘူး။ ရာဇဝင်ရိုင်းတယ်။
ခုလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတွက် မှုဆလင်တွေအစား အရမ်းဝမ်းနည်းရပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာဒီလိုဖြေရှင်းသင့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီလိုဖြစ်လာရတာကလဲ့ ရမ်းဗြဲက အသက် ၂၆ နှစ်အေရွှယ် ရခိုင်မလေတစ်ယောက်ကို မှုဆလင်ကုလား ၃ ယောက်က မဒိန်းကျင့်ပြီ၊လူမဆန်စွာသတ်ပြစ်ခဲ့တာကြောင့် ဒေါသထွက်နေတယ် တောင်ဂုတ်လူထုကြီးဟာ မလုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေ လုပ်မိကြတာပါ။ ဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ရခို်င်မလေး မဒိန်းကျင့်ခံရပြီး အင်္ဂါစတွေကို ဓာတ်းတွေနဲ့လှီးသတ်ခဲ့တာတွေ သတင်းအတော်များများက မရေးခဲ့ကြပါဘူး၊ မှုဆလင်တွေအသက်ခံရမှဘဲ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူမသိ၊သူမသိပျောက်သွားတဲ့ ရခိုင်တွေ လူကြီးမင်းတို့မသိကြပါဘူး၊ ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို မှုဆလင်ကုလားတွေ နိုင်ငံရေးအခွင့်ရေး ယူပါတော့မယ်၊ ရခို်င်လူမျိုးတွေကို ကမ္ဘာမှာ သရဲသဘတ်တွေလိုမြင်လာအောင် ဖန်တီးဖို့စောင့်နေကြပါတယ်။ လက်ဆိုတာ နှစ်ဘက်တီးမှာမြည်တာပါ။ ရမ်ဗြဲကျွန်းက ရခိုင်မလေးကို ကိစ္စမဖြစ်ခဲ့ ဒီကိစ္စဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်ပြီး တောင်ဂုတ်မြို့ဟာ ကုလားမရှိတဲ့မြို့ပါ။ ဒီလိုအချိ်န်မှာ ဒီအရပ်ကို မှုဆလင်ကုလားတွေ အနေနဲ့ချောင်သင့်ပါတယ်….
ထောက်ခံတယ် ဗျို့….။ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်မုဒိန်းကျင့် တာ ကို မှတ်တမ်းတင်… အင်္ဂါစတွေကို ဓာတ်းတွေနဲ့လှီး..နားရွက် ကို ဓါးနဲလှီဖြတ်.. သူ့အသက်ကို မသတ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ဦးချ တောင်းပန် တာတောင် လည်ပင်း ကို လှီးပြီး ရက်ရက် စက်စက်သတ်ပစ်တယ်..။ ဒီလိုမျိုးပဲ လူမသိ သူမသိနဲ ပျောက်သွားတဲ့ ကိစ္စ တွေ အများကြီး..။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကြီး မြင်ရတော့ လည်း စိတ်မကောင်းပါ..။ ပြသာတွေ ပိုကြီးထွားလာမှာ ကို ပဲစိုးရိမ်မိတယ်..။
Hnin Thiri Aung says:
ဒီကိစ္စရဲ့ တရားခံ ရင်းမြစ်က ဆင်ချင်တုံ တရားမရှိဘဲ ဖွလို့ရတဲ့ သတင်းဖြစ်ရင်ပြီးရော၊ ဘယ်သူသေသေငါမသေရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ အတန်းအစားထဲက သတင်းရေးဆရာတွေရဲ့ မဆင်မချင် သတင်းရေးသားမူကြောင့် ကုလားမဒိန်းကျင့်လို့ သေသွားတယ်ဆိုပြီး သတင်းကို high light လုပ်ရာကနေ စတင်တာပါ…. တကယ်ဆိုရင် မူခင်းသတင်းဂျာနယ်ကို ဝယ်ဖတ်တဲ့လူတွေ၊ နားလည်တက်တဲ့လူတွေဆို သိမှာပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဒိန်းမှုတွေ ဘယ်လောက်များလဲ ဆိုတာကို….. နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာလဲ ဒီမဒိန်းမှုဆိုတာ ရှိပါတယ်…. မဒိန်းကျင့်မှုကို ဘာသာခြားတွေဘဲ ကျူးလွန်နေတာ မဟုတ်သလို ဘာသာတူတွေဘဲ ကျူးလွန်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး…. စာတက်ရင် သိနိုင်မှာပါ။ နယ်မှ တွေမှာ ပထွေးက မယားပါ သမီးကို မဒိန်းကျင့်တာ… တရွာတည်းသားအချင်းချင်း မဒိန်းမှုတွေ ဖြစ်နေတာ မဒိန်းကျင့်ပြီး အမူဖွင့်တိုင်တန်းခံရမှာဆိုးလို့ လက်ဆဖျောက် အသတ်ခံရတဲ့ သတင်းတွေက အပတ်စဉ် မှုခင်း ဂျာနယ်တွေမှာ မျက်မြင်ဘဲဖြစ်ပါတယ်….. ဒီကိစ္စမှာ တာဝန်အရှိဆုံးသူကတော့ သတင်းကို မဆင်မချင်ရေးသားပြီး လူမျိုးရေး ပြသာဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဂျာနယ်တိုက်၊ စာရေးဆရာတွေကို ပါ စီစစ်အရေးယူသင့်ပါတယ်…. တကယ်ဆို ဒီမိုကရေစီလို့ ခေါင်းစဉ်တက်ပြီး က ကို ယ ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ဖွနေတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့ အကျင့်နဲ့ သိက္ခာကိုလည်း တည့်မက်ပေးရန် အမှန်ပင် လိုအပ်နေပြီး လို့ ထင်တယ်………………
အားလုံး အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကျပါစေ
အမြော်အမြင်မရှိ ဒေါသမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက် အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေခံကြလေတော့။ ဒီကိစ္စ ဒီမှာတင်ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော၊ဗူးသီးတောင်ဘက်ကို လုံခြုံရေးစစ်တပ် အမြန်ချစေချင်ပါတယ်၊ အခြေအနေတွေ အရမ်းတင်းမာလာနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အရေးပေါ် အမြန်ကြေငြာသင့်ပါတယ်ကြောင်းပါ…….
moe kaung says:
တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ဘာသာတရားတွေက လူသားတွေကို ကောင်းမှုတွေကျင့်ပီး မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ဖို့ ပြောဆိုဆုံးမတယ်။ ဘယ်သာဝင်မဆို ကောင်းတဲ့သူတွေရှိသလို၊ မကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ တဦးတယောက်မကောင်းတာကို သံရောင်လိုက်ပီး သတ်ကွ၊ချကွဆိုရင် လူသားမှာရှိသင့်တဲ့ အသိညှဏ်ထက်နိမ့်ပါးပီး တရိစာ္ဆန်ထက်တောင် အောက်တန်းကျသွားမယ်။ အခုအသတ်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက ၈-ဦးက တရားကျင့်ကြံနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ သိရတယ်။ ရှေ့ဆက်ပီးဒါတွေ ဆက်မဖြစ်အောင် အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မီလောင်ရာလေပင့် မဖြစ်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
If this incident eventuates into Myanmar Kosovo which is very unlikely at this stage, it will definitely our cross to bear. So sad. Mandalay is another Tinderbox waiting to explode anytime…
အင်း .. စစ်တွေဖက်မှာလဲ တမျိုး ၊ တောင်ကုတ်ကလဲတမျိုး ၊
ငပလီကိုသွားမယ်ဆိုရင် တောင်ကုတ်ဖက်က နိုးပဲ ၊ ငသိုင်းချောင်းဖက်က ဂိုးတော့မယ် ၊
ဒါလဲလေ ငပလီ သွားရမှာတောင် ခပ်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်နေပြီ၊
ကြားရသမျှ မြင်ရသမျှ စိတ်ဒုက္ခရောက်ရပါလား ။
Ar Ri ပြောတာထောက်ခံတယ်မင်းတို့ဗမာကောင်တွေစောက်ကုလားတွေကိုသတ်တော့ကောင်းတယ် ငါတို့ရခိုင်တွေခွေးကုလားတွေကိုသတ်တော့မင်းတို့ဗမာတွေက လူကောင်းယောင်ဆောင်တယ်စောက်သုံးမကျတဲ့ ဗမာကောင်တွေကုလားတွေကိုလဲသတ်မယ် ကုလားဘက်ကနာတဲ့ခွီးဗမာတွေကိုလီးသတ်မယ်
မင်းဆိုလိုချင်တာက .. ကုလားနဲ့ဗမာကိုရော ကွဲခြားတတ်လား. ကုလားဆိုတာ မင်းတို့အဘိုးအဖခေတ်က အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်. ဟိနူကုလားကိုပြောတာ. မင်းအိမ်အတွင်းမှာထားတယ် မင်းကိုးကွယ်တဲ့ မင်းရဲ့ ဗုဒဘုရားဆိုတာလဲ ကုလားပြည်က လာတယ်ဆိုတာကို မင်းကိုလူကြီးမပြောပြပေ့မယ်..သမိုင်းမှာတော့ ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရော မင်းသိလား. ကုလားတိုင်းက တကယ်တော့ မင်းပြောချင်တယ် ဗမာလူမျိုးတွေပါပဲ. ဗုဒဘာသာကို ကိုးကွယ်နေတဲ့လူတိုင်းက တကယ်တော့ ရေတောင်မရောတဲ့ ကုလားအစစ်တွေပါပဲဗျာ..
ဖြစ်သင် ့လို ့ဖြစ်တာဆိုရင်မပြောလိုပါ။အခုဖြစ်နေပုံကမင်းမဲ ့စရိုက်ဆန်လွန်းပါတယ်။ မိမိတို ့ရဲ ့အတ္တကိုဒေါသနဲ ့ရောပြီးမလုပ်သင် ့တာတွေလုပ်ကုန်ကြတော ့အနာဂတ်မှာမလိုလားအပ်တဲ ့ဘာသာရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာတရား အရကြည် ့မယ်ဆိုရင်လည်းမသင် ့တော်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို ့နိုင်ငံကလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင် ့ပေးထားတဲ ့နိုင်ငံပါ။ နိုင်ငံတကာအမြင်မှာလည်းအထင်သေးစရာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ် ့ပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံတော်ကဖြေရှင်းရခက်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင် ့ယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ဖို ့အတွက်အားလုံး စဉ်းစားပြီးအကောင်းဆုံးထိန်းပေးနိုင်ကြပါစေလို ့……..
တစ်ခုသတိထားရမှာက အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ်ပြီး ခွတ်ခိုင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးမှာ ကိုယ်တွေမပါသွားရအောင် အလှည့်စားမခံရအောင် သူတို ့တွေလှည့်ကွက်ထဲ ကို မရောက်မိ ရအောင် အမျိုးသားရေးသတိနဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲကြဖို ့လိုတယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း အဲလိုဖြစ်ရင် ဟိုဘက်က လက်ခမောင်းခတ် လက်ခုတ်လက်ဝါးထတီးပြီး ဝမ်းသာနေလိမ့် မယ်။ ခုပြောနေကြတဲ့လူတွေထဲမှာလည်း ဘယ်သူက ဘာဆို တာမသိရတာဆိုတော့ အထူးသတိရှိကြပါ။
shwe pont နင်ကကုလားမယားဗမာမလားဒါငတို့ရခိုင်တွေနဲ့ကုလားတွေအရေးအခင်းနင်တို့
ဟေ့ကောင် ဆန်းထွန်းကျော် ….. ဒါကမင်းတို့ ရခိုင်နဲ့ ကုလားအရေးမဟုတ်ဘူးကွ….. မင်းတို့ရခိုင်ဆိုတာ ငါတို့ဗမာနဲ့ ညီကိုတိုင်းရင်းသားချင်းတွေ ….. ဟိုကလားတွေက ငါတို့နဲ့ဘယ်လိုမှဆက်စပ်လို့မရတဲ့လူမျိုးတွေ ….. အေး…ဒါပေမဲ့ မင်းတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ ကုလားတွေ စောက်ပြသနာအကြီးအကျယ်ထပ်ပြီးတက်ပြီဆိုပါဆို့ …… ခုမှ စစ်ကျွန်အောက်ကလွတ်ရုံလေးရှိပြီး ဒီမိုကရေစီဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ အခြေအနေကနေ စစ်တပ်အာဏာပြန်သိမ်းပြီး 88 ခေတ်လွန်လိုပြန်ဖြစ်သွားရင် ကုလားရော ရခိုင်ရော ချင်းရော ကရင်ရော ဗမာရော အကုန်ခွေးပြန်ဖြစ်မှာကိုမင်းတို့သတိထားမိရဲ့လား ……. ရခိုင်ကောင်မလေး မုဒိန်းကျင့်ခံရပြီးလည်လှီးခံရတာကို ငါတို့ဗမာအပါအဝင် အခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေပျော်နေမယ်လို့ မင်းထင်နေသလား…. အေး…… ဒါပေမဲ့ မင်းတို့ ကုလား 10 ယောက်လောက်ကို အဲ့လိုကြီးလုပ်လိုက်တာ ဘယ်အထိကိုဦးတည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို မင်းတို့သတိထားမိရဲ့လား …… ကလဲ့စားချေမယ်ဆိုရင် ချေလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပါကွာ ……..
ဗမာနဲ့ ရခိုင်ဆိုတာ ညီအကိုအရင်းတွေပါ။မင်းတို့ဗမာ ဆျုပြီး ခွဲ မပြောပါနဲ့။ ရခိုင်ကိုထိလဲ ဗမာတာတယ် ဗမာကိုထိလဲ ရခိုင်နာပါတယ် ။
ကုလားတွေကို သတ်လို့ ကျုပ်တို့ဗမာတွေ နာတာမဟုတ်ပါဘူး။
မင်းတိုရခိုင်ဘယ်အဆင့်အတန်းကဆိုတာကို ယခုမှာ world က သိမှာ.. အတော်ကို အောက်တန်းကျတဲ့ ကုလားပြည်က လွှင့်လာတဲ့ ကူးလားရခိုင် (သို့) ကုလားစုတ် ရခိုင်ဗုဒဘာသာဝင်တွေပဲကွာ………………. မင်းတို့အတွက် လက်ညောင်းတဲ့ကွာ.